တရုတ် PET&PBT ဆေးသုတ်စုတ်တံ အမွေးအမှင်ပြုလုပ်သည့်စက် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
ပလပ်စတစ် ပိုက်ထည့်သည့် စက်
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ပလပ်စတစ် တံမြက်စည်းချည်မျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ်ဖြီးအမျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ်ကြိုးချည်မျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ် ပေါင်းစပ်ဆံပင်ချည်မျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ် ဓာတုမျက်တောင် မျှင်မျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ်အလှကုန်ဖြီးအမျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ် သွားတိုက်တံ အမျှင်ဓာတ် ချည်မျှင်ထုတ်စက်
ပလပ်စတစ်ဆေးသုတ်ခြင်းဖြီးအမျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ်ဘေးကင်းရေးပိုက်ကွန်ပိုက်လိုင်း extruding စက်
ပလပ်စတစ်ငါးဖမ်းပိုက်ပိုက်မျှင် extruding စက်
ပလပ်စတစ် နိုင်လွန် အမျှင်ဓာတ် ထုတ်စက်
ပလပ်စတစ် PET ဝါယာကြိုး extruding စက်
Customer & Exhibition ဓာတ်ပုံ
PET&PBT ဆေးသုတ်စုတ်တံ အမွေးအမှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
ပလပ်စတစ် PET ထင်းရှူးပင်အပ်ချည်မျှင်ဆွဲစက်
ပလပ်စတစ် PET PA နိုင်လွန်ဇစ်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
PET Broom Filament Making Machine
PET&PBT ဆေးသုတ်စုတ်တံပြုလုပ်သည့်စက်သည် ကုန်ကြမ်း PET&PBT အရောအနှောဖြင့် ဓာတုအမွေးအမှင်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအမွေးအမှင်များကို အမျိုးမျိုးသော ဆေးသုတ်စုတ်တံ ထုတ်ကုန်များအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။
PET&PBT သုတ်ဆေးဖြီးအမွေးအမှင်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြို့ပြဧရိယာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်းသည် ဖြောင့်တန်းသော အမျှင်များနှင့် ချည်မျှင်ချည်မျှင်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ချည်မျှင်အချင်းကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်းမှထုတ်လုပ်သော ချည်မျှင်သည် သုံးစွဲသူများတောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်သော တောက်ပပြီး တောက်ပသော၊ အရောင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကောင်းသောလက္ခဏာများရှိသည်။ အပူချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကွေးခြင်းပြန်လည်ရယူခြင်းကို ရရှိပါသည်။ အဝိုင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်၊ စတုရန်းပုံ၊ cinquefoil၊ တြိဂံ၊ အခေါင်းပေါက် စသည်တို့ကဲ့သို့ ဖြတ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်းသည် အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော PET ပုလင်းအမှုန်အမွှားများကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရည်အသွေးသည် အပျိုစင်ကဲ့သို့နီးပါး ကောင်းမွန်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
ယူနစ်အား အကောင်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သင့်လျော်သော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖြင့် ပြုလုပ်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်းဇာတ်ကောင်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါမော်ဒယ်လ်ကို အဓိက ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
>> မော်ဒယ် ကန့်သတ်ချက်များ
ဝက်အူ L/D ၃၀:၁
ဂီယာဘောက်စ် မော်ဒယ် 200
စွမ်းရည် (kgs/h) 30-125 ကီလိုဂရမ်/နာရီ
Mold Dia 200
Filament Dia 0.06-0.30mm
အသေခေါင်း + ချည်စက်များ
5. စက်လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စိတ်ကြိုက်နည်းပညာ
6. ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အောင်မြင်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို အမှားရှာခြင်းအား ပံ့ပိုးပါ။
7. ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စက်စစ်ဆေးခြင်း။
8. One-stop ဝန်ဆောင်မှုစနစ်
ဆေးသုတ်စုတ်တံ၊ ပန်းချီဆွဲစုတ်တံ၊ စက်ရုံသုံးနှင့် မြို့ပြအသုံးပြုမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် သုတ်လိမ်းသော စုတ်တံ ထုတ်ကုန်များ
>> PET&PBT ဆေးသုတ်စုတ်တံ အမွေးအမှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
ယခင်- ဂုဏ်သတင်းမြင့်သော တရုတ်ပလပ်စတစ် PET Broom Brush Monofilament Making Machine
နောက်တစ်ခု: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြမ်းပြင် Brush Monofilament Extruder စက်
Q: သင့်ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
မေး- စက်လိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် နမူနာပေးပို့နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်နမူနာများအတိုင်း စိတ်ကြိုက်စက်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
Q: လည်ပတ်နေသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ကြည့်ရှုရန် သင့်စက်ရုံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ သွားရောက်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်လိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လည်ပတ်နေသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ကြည့်ရှုရန် သင့်အား စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။
မေး- ကျွန်တော်တို့မှာ လည်ပတ်နေတဲ့ စက်လိုင်းမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
A- ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြဿနာကို အချိန်မီဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးမည့် ပြီးပြည့်စုံသော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒရှိသည်။
Brush အတွက် Monofilament ထုတ်လုပ်မှုစက်
Paint Brush Filament စက်
Paint Brush Filament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Pbt Brush Fiber ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Pbt Brush Monofilament Line
Pp Brush အမွေးအမှင်စက်
Pp Brush Fiber စက်
Pp Brush Filament Extruder
Pp Brush Filament Extrusion Line
Pp Brush Filament စက်
Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd. သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာ အထူးပြုကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည်။
Pingcheng အနောက်လမ်း၊ Jiaoxi စက်မှုဇုန်၊ Jiaozhou၊ Qingdao၊ Shandong၊ တရုတ်နိုင်ငံ။